Famerenana Tablet Kids 2022 - Torolalana feno
Reviews ny ankizy Tablet
Fanomezana ho an'ny zazakely
Fanomezana ho an'ny zaza 1 taona
takelaka ho an'ny mpianatra
iPads ho an'ny ankizy
fampiasam-bola ho an'ny ankizy
Fanadihadiana Tabletan'ny Ankizy - Tablety tsara indrindra ho an'ny ankizy 2022
Mitady azo itokisana ianao Fitsapana tablette ankizy amin'ny fomba mangarahara? Manana isika Ny takelaka ankizy tsara indrindra 2022 nosedraina.
Tablets avy amin'ny Apple
Tablets avy amin'ny Amazon
Tablets ho an'ny mpianatra
Modely tsara indrindra 2022
Tonian-dahatsoratra fitsapana tablette ho an'ny ankizy
Nohavaozina tamin'ny 29 aprily 2022
Mitady azo itokisana ianao Fitsapana tablette ankizy amin'ny fomba mangarahara? Manana isika Ny takelaka ankizy tsara indrindra 2022 nosedraina. Ny fividianana takelaka ho an'ny ankizy dia fampiasam-bola lehibe. Manana ny modely amin'izao fotoana izao momba ny vidiny-fampisehoana sy Notsapaina ny fitiavan-janaka. Vakio izao ary arovy ny tenanao amin'ny vola lany ny endri-javatra tsara indrindra ho anao sy ny zanakao. Tsindrio eto izao raha te hamaky ny hevitray momba ny takelaka samihafa ary fantaro hoe iza no mety ho an'ny zanakao.
Laharana mpandresy amin'ny fitsapana sy topimaso
Rehefa novidina vaovao dia tokony hanana endri-javatra betsaka araka izay azo atao ny tablette ho an'ny ankizy nefa azo fehezin'ny ray aman-dreny
Checklist ho an'ny ankizy tablette
Vokatry ny fitsapana tablette ho an'ny ankizy amin'ny antsipiriany
1. Blackview Tab 6 takelaka ho an'ny ankizy
manova: Telo na valo taona
childlock: faritra iKids ho an'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny, vata fampangatsiahana fampiharana, fiarovana ny tenimiafina, fitantanana fotoana, fitantanana fampiharana, fitantanana fampiasana, fitantanana tranokala
Kaonty ankizy maromaro: Eny
fiantohana: 2 taona (Araka ny filazan'ny mpanamboatra: Raha sendra misy lesoka dia azo averina any amin'ny mpanamboatra ilay izy ary misy tablette fanoloana aterina)
fahasalamana: Teknolojian'ny hazavana manga ambany, maody maizina, tsy misy poizina sy tsy misy fofona ny raharaha
Fahafaha-mitahiry: 32GB (256GB azo avela)
fakan-tsary: aoriana, aloha
fakan-tsary: ‎2MP + 5MP
Vokatry ny vokatra X X 20.8 12.4 0.9 sm
vatoaratra Batterie lithium-ion 1 ilaina (tafiditra).
loko: Manga / Mavokely
Haben'ny fampisehoana ‎8 mirefy, 1280*800 avo lenta IPS touchscreen
Processeur: 2,0 GHz (12 nm quad-core Unisoc-T310)
Cores an'ny processeur: 8
fahatsiarovana fidirana an-tsokosoko: 3 GB RAM
Karazana fifandraisana: ‎5G WIFI, 4G LE, Bluetooth
rafitra fikirakirana ‎Android 11 & Doke OS_P 2.0
Fiainana bateria9.9w ora
Lanjan'ny entana : 365 grama
Ny naoty 9.6
Ho an'ny tolotra tsara indrindra
Vakio ny hevitra
Fifandraisana: Port USBC, slot MicroSD, jack headphone 3,5mm
SIM: Dual SIM (2*Nano SIM na 1*Nano SIM + 1*microSD)
Specials: fomba fialamboly misy ecran roa, 4G LTE roa: afaka mampiasa karatra telefaona roa miaraka, fanokafana Face ID, kitapo hoditra
Rafitra fiasana: Fire OS
Haben'ny fampisehoana: 10,1 in
fiantohana: 2 taona
famaha ny efijery: 1080px
Mifanaraka amin'ny WiFi
Fitahirizana 32 GB
Loko: Case amin'ny manga lanitra, aquamarine na lavender
Fakantsary aloha sy aoriana
childlock Sivana taona, tanjona fianarana ary fe-potoana
fanitsiana taona: rehefa tafiditra ny daty nahaterahana
Google Play Store azo atao
fomba fitsitsiana herinaratra
seranana fiampangana: USB-C-(2.0)
Fiainana bateria: Hatramin'ny 12 ora
Ny isa 9.65
Rafitra fikirakirana: Android 10
Haben'ny fampisehoana: 8 in
famaha ny efijery: 1920 x 1200 Pixel
Fampisehoana HD 8 santimetatra
Fitehirizana: 32GB (azo avela ho 128GB)
Loko: loko roa; manga sy mavokely
Playstore: Google Play Store azo atao
fiarovana: AEEZO Maimaim-poana App Fanaraha-maso ny ray aman-dreny: Mifandraisa amin'ny ankizy ary jereo ny hetsika vao haingana + matetika sy ny faharetan'ny fampiasana
Fiainana bateria:9.25 ora
Dimensions: 21 x 12.5 x 1 cm; 350 grama
fakan-tsary: fakan-tsary roa (2MP+5MP).
fiantohana: Famerenana sy fifanakalozana herintaona.
Ab 100,99 vidiny 84,99 Euro
Rafitra fikirakirana: OS OS
Antoka 2 taona: Hosoloina maimaimpoana ny fitaovana
0% famatsiam-bola: €45,00 x 3 isam-bolana
Fampisehoana HD 8 santimetatra ho an'ny sary maranitra sy horonan-tsary
Amazon Kids +: tranomboky media tsy misy doka
Mifanaraka amin'ny WiFi: Internet tsy misy fetra
32 GB fahatsiarovana miaraka amin'ny slot microSD: hatramin'ny TB 1 azo itarina
Loko: Misy amin'ny loko telo
mombamomba ny ankizy
Ny fametrahana ny fotoana fampiasana ho an'ny ankizy dia azo atao
Ny isa 9.2
childlock: rafitra fiarovana ny tenimiafina, fametrahana ny fotoanan'ny efijery, ny fomba fiarovana ary ny fitantanana ny atiny.
fahasalamana: Teknolojia Fahazavana Manga ambany
Fahafaha-mitahiry: 32 GB (azo itarina hatramin'ny 128 GB ambony indrindra)
fahatsiarovana fidirana an-tsokosoko: 2 GB RAM
Vokatry ny vokatra X X 21 12.4 1 sm
Display: 8 santimetatra, 1920x1200 teboka
Processeur: 1,6 GHz quad-core processeur
Cores an'ny processeur: 4
Karazana fifandraisana: Wi-Fi
rafitra fikirakirana ‎ Android 9.0 – 10 (miovaova ny famaritana)
accumulator: 5000mAh Lithium polymère batterie
Fiainana bateriaora: 4.9 watt
Lanjan'ny entana :863 g
Fifandraisana: USB Type-C, slot MicroSD, jack headphone
trano fivarotana: Azo atao
Specials: Fampiharana “vondrona fianakaviana” ahafahana mifampiresaka sy manao antso an-tsary miaraka amin'ny ankizy
Contra: Charger 5V 2A dia mila vidiana mitokana
Ny isa 9.1
marika: ‎ ANYWAY. GO
Vokatry ny vokatra X X 24.4 20.2 3.4 sm
Display: 8 santimetatra, 1280x800 teboka
Karazana fifandraisana: Bluetooth, WiFi
rafitra fikirakirana Android 10
accumulator: 6000mAh Lithium polymère batterie
Fiainana bateriaora: 9.25 watt
Lanjan'ny entana : 540 grama
Ny isa 9.0
marika: Pebble Gear
childlock: Ny ray aman-dreny dia afaka manara-maso, mametraka ny fotoana lalao, ny faharetan'ny lalao ary ny fidirana amin'ny fampiharana amin'ny kaonty ray aman-dreny
fahasalamana: Sivana jiro manga, lalao avy amin'ny fivarotana fampiharana manokana dia tsy misy doka tanteraka
Fahafaha-mitahiry: 16 GB (manodidina ny 12 GB mbola misy aorian'ny fametrahana voalohany)
Vokatry ny vokatra 25x18x2cm; 780 grama (Frozen), 7.7 x 17.5 x 24.1 sm (Fiara),
loko: Manga Maivana (Frozen), Voankazo Mavo (Kilalao), Mena famantarana (Fiara), Manga Turquoise (Bunds Mickey Mouse + Headphone)
Haben'ny fampisehoana 7 injy
rafitra fikirakirana ‎Android 8.1 Oreo / na Android 8.1 Go (Mickey Mouse and Cars version)
Lanjan'ny entana : 780 grama (Frozen), 485 grama (Mickey Mouse),
Fifandraisana: Micro USB seranana, MicroSD slot
trano fivarotana: Tsy azo atao (Youtube sy Youtube Kids dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny alalan'ny Safe-Brower sy ny lisitra fotsy)
Specials: Lalao sy fampiharana 500 mahery miaraka amin'ny fidirana maimaim-poana 12 volana amin'ny 'GameStore Junior App Store'. (Taorian'izany 39,99 euros nandritra ny herintaona.)
Ny isa 8.9
Avy amin'ny 89,90 - 124,99 EUR
Vokatry ny vokatra ‎19 x 12 x 1 cm; 350 grama
Cores an'ny processeur 4
Haben'ny RAM 2 GB
Fitehirizana Art DDR3 SDRAM
Karazana fifandraisana Wi-Fi
famaha ny webcam 2MP
rafitra fikirakirana Android
vatoaratra tafiditra Eny
Fiainana bateriaora: ‎11.1 watt
Lanjan'ny entana : 350 g
Ny isa 8.6
avy amin'ny 98,99 EUR
Rafitra fandidiana: Android 10
Haben'ny fampisehoana: 7 in
Fampisehoana HD 7 santimetatra
Loko: Misy loko roa: manga sy mavokely
AEEZO maimaim-poana App Fanaraha-maso ny ray aman-dreny: Mifandraisa amin'ny ankizy ary jereo ny hetsika vao haingana + matetika sy ny faharetan'ny fampiasana
Ny isa 8.4
avy amin'ny 85,83 EUR
Metodôlôjia amin'ny fitsapana tablette ho an'ny ankizy
Nampiasainay sy notsapainay avokoa ireo takelaka 23 samy hafa ho an'ny ankizy nandritra ny fitsapana nandritra ny 5 andro. Avy amin'ny fitambaran'ny takelaka 20 azo atao ho an'ny ankizy, dia nampiasa 10 tamin'ny fitsapana nandritra ny fotoana lava kokoa izahay ary nametraka azy ireo tamin'ny diany. Ny fiarovana amin'ny fitaovana, ny rafitra fiasana ampiasaina ary koa ny fikarakarana ho an'ny ankizy no fepetra fototra ho an'ny fanombanana.
Tsy maintsy nifanaraka tamin'ny filan'ny ankizy ny interface interface. Anisan'izany ny fahatsapan'ny fikasihana, ny fitetezana miaraka amin'ny fahaiza-manao maotera ambany ary ny fandrafetana ny menus sy ny atiny. Tsy maintsy ho mora azon’ny ankizy ireny.
endri-javatra ara-teknika. Anisan'izany ny famahana ny fampisehoana, ny famirapiratana ary ny fisaintsainana. Ary koa ny haben'ny fahatsiarovana, ny fakan-tsary ary ny hafainganam-pandehan'ny processeur.
Fametrahana fiarovana sy fanaraha-maso ho an'ny mpiambina ara-dalàna. Tsy maintsy nisy ny mety hamerana ny fotoana fampiasana. Ny ray aman-dreny dia tokony ho afaka mifehy ny votoaty azon'ny ankizy lanin'ny ankizy ary afaka manara-maso ny asan'ny ankizy. Ny fampiharana ray aman-dreny dia tombony.
fahamarinan-toerana. Ny karazana sy ny haben'ny casing dia tsy maintsy nahazaka ny fianjerana farafahakeliny 3 metatra. Ankoatra izany, tsy tokony hisy fofona tsy mahafinaritra avy amin'ny fitaovana.
Cost. Nesorintsika tanteraka tamin'ity topimaso ity ireo mpanamboatra manana vidiny miafina na fandrika famandrihana.
Vokatra amin'ny antsipiriany: takelaka Amazon Fire 8HD
Ny Fire 8 HD Tablet Kids Edition dia manana rafitra plastika miorina tsara kalitao. Ny zaza madinika sy ny zaza tsy ampy taona izay te-hitsapa ny fetrany sy ny mety hanimba ny takelaka dia azo ampiasaina tsara amin'izany. Mino izahay fa ity takelaka ity dia ho namana matanjaka mandritra ny taona maro, eny fa na dia ho an'ny ankizy kely aza, satria ny angon-drakitra mpampiasa nodinihinay dia mampiseho fa ny rafitra sy ny efijery dia mitazona tsara rehefa ampijalian'ny ankizy.
Safidy tsara ho an'ny ankizy ny tablette satria maivana, mateza ary manana bateria maharitra. Fanampin'izay, manolotra mihoatra noho ny lalao fotsiny izy io - azonao ampiasaina hijerena sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra, mamaky boky, milalao fampiharana fampianarana, na manao devoara mihitsy aza! Ary miaraka amin'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny, azonao atao ny mametra ny zavatra hitany amin'ny Internet mba tsy hiharan'ny zavatra tsy mety.
✔️ Garantie tsy misy ahiahy roa taona: Hosoloina ilay fitaovana raha tapaka mandritra io fe-potoana io
✔️ Fanaraha-maso ny ray aman-dreny: haavon'ny fiarovana azo amboarina tanteraka mifototra amin'ny taona sy ny safidin'ny mpampiasa
✔️ Ny famatsiam-bola dia azo atao amin'ny 0 isan-jato ao anatin'ny telo isam-bolana manodidina ny 45 euros
✔️ Fampisehoana valo santimetatra miaraka amin'ny fanapahan-kevitra HD feno
✔️ Tranomboky fampahalalam-baovao manokana tsy misy doka miaraka amin'ny famandrihana AmazonKids+
❌ Tsy misy Google Play Store azo atao satria mampiasa Fire OS (rafitra fiasan'ny Amazon manokana) ny fitaovana fa tsy Android. (Tariho ny fomba fametrahana Netflix na izany aza)
❌ Toa maizina ny fampisehoana
❌ Tsy azo atao ny LTE rehefa mandeha
tablette ankizy misy nividy vaovao saika ny endri-javatra rehetra entin'ny fitaovana ho an'ny olon-dehibe eny an-tsena. Ny mpanamboatra dia nametraka ny tenany ho tanjona ny hamela ny takela-bato miaraka aminy mba hahafahan'ny ankizy mampiasa azy ireo tsy miankina. Mandritra izany fotoana izany, misy ihany koa ny asa izay ray aman-dreny avelao ny Fehezo ny fotoanan'ny efijerin'ny zanany sy ny fampiasana Internet ary manara-maso. Ka ny takelaka ho amin'ny taona ambony kokoa sy mitohy any an-tsekoly afaka maro Modely tablette mety ho an'ny mpianatra. Amin'ny lafiny iray, ny tablette ankizy maoderina dia mikendry ny hanao izany araka izay azo atao zaza-friendly mba hanomezana fahafahana ny ankizy hahazo tombontsoa tsy miankina hatramin'ny fahazazana ary mifanaraka amin'izany amin'ireo mpampiasa madinika mitombo miaraka. Satria azo ampifanarahana amin'ny taona rehetra izy ireo, ny takelaka dia afaka mandeha lavitra faharetana manatratra. Misy iray koa izany lafiny tontolo iainana, izay tokony hodinihinao rehefa mividy. Ray aman-dreny maro koa no manontany tena raha a Misy dikany ny takelaka ho an'ny ankizy dia ary amin'ny rehetra sarobidy ara-panabeazana mety ho. Hiditra amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ireo teboka etsy ambany ireo izahay amin'ny fitsapana.
Ny takelaka maoderina dia manana endri-javatra maro ahafahan'ny ray aman-dreny mifehy ny ankizy mandritra ny fampiasana azy ireo ary manome ny ankizy ny fahafahana manambatra ny lalao sy ny fahafinaretana amin'ny fianarana. Ny takelaka ho an'ny ankizy 2021 dia tokony hampidirina dia:
Fameram-potoana hamerana ny fotoana fampiasan'ny ankizy (Bebe kokoa momba ny lohahevitra: Firy ny fotoana entin'ny efijery tsara ho an'ny ankizy? / Fanidiana ny fotoanan'ny efijery ho an'ny ankizy)
Endri-javatra toy ny fakan-tsary, fakan-tsary anoloana ary fakantsary aoriana
Slot Micro-SD hanitatra ny fitahirizana
Fiarovana mafy orina amin'ny fahasimban'ny fiatraikany (Bebe kokoa momba ny lohahevitra: herisetra amin'ny fahazazana)
Safidy famandrihana USB-C
Output headphone, fampidirana mikrô ary fametrahana latabatra
Valin'ny fitsapana tablette ho an'ny ankizy - tablette inona no tsara indrindra ho an'ny ankizy?
Amin'ny maha-tablette ho an'ny ankizy dia iraisan'ny besinimaro no manoro izany Fire 8 HD Tablet Kids Edition. Ny antony lehibe: Anisan'izany amin'ny alàlan'ny Amazon one roa taona garantie. Noho izany dia tapaka ny fitaovana, azonao ampiasaina avy hatrany fifanakalozan - ary nandritra ny roa taona. Ankoatra izany, dia manasongadina ny fiasan'ny takelaka feno tanteraka ho an'ny olon-dehibe ary afaka mitombo miaraka amin'izy ireo. ny mpampiasa interface tsara ary ny atiny dia miovaova, azo fehezina ary mifanaraka amin'ny Mifanaraka amin'ny filan'ny ankizy, ny Tablet afaka farafaharatsiny ho an'ny taona fianarana ampiasaina. Ny laharana faharoa dia ny takelaka ho an'ny ankizy Vankyo S8. Misy miaraka amin'ny 60 GB ny lehibe indrindra Toerana fitehirizana, Ho fanampin'ny fomba amam-panao ray aman-dreny, dia manana fomba mora amin'ny maso ihany koa izy. Misy ihany koa ny fakan-tsary eo anoloana sy aoriana miaraka amin'ny kalitaon'ny sary tsara ary azo alaina ho an'ireo tia Google Playstore. Izy io koa dia takelaka feno tanteraka. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana taona, ny Vankyo S8 dia azo ampiasaina hatramin'ny taom-pianarana.
Ny tablette dia fomba tsara hampiala voly ny zanakao.
Kids Tablet Test no toerana tsara indrindra hahitana izay takelaka mety aminao sy ny fianakavianao. Manana hevitra momba ny takelaka ambony rehetra izahay mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny takelaka mety aminao. Ho hitanao hoe inona no endri-javatra ananan'ny takelaka tsirairay, ohatrinona ny vidiny, ary firy taona no sahaza azy alohan'ny hividianana azy.
Ny hevitra fanomezana tonga lafatra! Omeo zavatra ho tiany ny zanakao ary izany dia hanampy azy ireo hianatra bebe kokoa momba ny teknolojia eto amin'ity tontolo nomerika iainantsika ankehitriny ity. Fanampin'izay, ny ankamaroan'ny takelaka dia feno fampiharana fampianarana izay afaka manampy ny ankizy hianatra fahaiza-manao vaovao sady mampiala voly azy ireo.
Mandeha foana ny ankizy ary mila zavatra hampiala voly azy ireo.
Ny takelaka dia fomba tsara ho an'ny ankizy hianatra momba ny teknolojia ao amin'ny tontolo azo antoka izay tsy manelingelina azy ireo amin'ny fianarany toy ny azon'ny finday avo lenta. Ary raha tia milalao lalao amin'ny tablette ny zanakao, dia tonga lafatra izany satria misy lalao fampianarana maro be koa! Aza miandry intsony àry fa makà tablette ny zanakao anio!
Mampiasa cookies amin'ny tranokalanay izahay hanomezana anao traikefa tena ilaina indrindra amin'ny fahatsiarovana ireo safidinao sy famerenana mitsidika. Amin'ny fipihana ny "Accept All" dia manaiky ny fampiasana ny cookies rehetra. Na izany aza, azonao atao ny mitsidika ny "Cookie Settings" hanomezana fanekena voafehy.